Xoriyataladda Xorta ah ee Sharafta leh (Qaybta 54aad): Maalmo Wanaagsan Ka Hor, Qeybta 3aad
TEXT: Muujintii 22: 12-21
Oo bal eeg, anigu dhaqsaan u imanayaa. oo abaalgudkaygiina waan wataa si aan nin walba ugu abaalgudo sida shuqulkiisu yahay.
13 Anigu waxaan ahay Alfa iyo Oomeega, bilowgii iyo dhammaadkii, iyo kuwii hore iyo kuwii dambeba.
14 Waxaa barakaysan kuwa isaga amar siiya inay si caqli leh u siqaya geedka nolosha, oo ay magaalada irdaha ka soo galaan.
15 Maxaa yeelay, dibadda waxaa jooga eeyihii, iyo saaxiriintii, iyo kuwa sinaysta, iyo gacankudhiiglayaashii, iyo kuwa sanamyada caabuda, iyo ku kasta oo been jecel ama sheega.
18 Oo anigu waxaan ku idhaahdaa nin kasta oo maqla erayadii wax sii sheegidda oo kitaabkan lagu qoray, Haddii nin wax ku daro iyaga, Ilaah wuxuu isaga ku dari doonaa belaayooyinka kitaabkan ku qoran;
19 Oo haddii nin wax ka qaado erayadii kitaabka wax sii sheegiddan, isna waa la baabbi'in doonaa magici doona, oo wuxuu ku qaadi doonaa buurtiisa iyo magaalada quduuska ah iyo waxyaalaha kitaabkan ku qoran.
20 Ku alla kii waxyaalahan ka markhaati furayaa, wuxuu leeyahay, Haah, anigu dhaqsaan u imanayaa. Aamiin. Sidaas oo kale, soo gal, Rabbi Ciise.
Nimcada Rabbi Ciise Masiix ha idinla jirto kulligiin. Aamiin.
Fariinkiisii ​​ugu dambeeyay, waxaan sii waday inaan eegno martiqaadka dariiqa ah ee Ciise Masiix inuu 'ku biiro' oo leh ballanqaad ah in maalmo ka wanaagsan ay sii socdaan. Quduusnimada maalinta Yooxanaa waxay u baahnayd farriintan rajada; Dunidan maanta waxay ubaahan tahay fariintaas rajada; iyo adduunka oo la sii sheegay ee ku sugan Muujintii ayaa dhab ahaantii u baahan fariin this farriinta. Inagoo la soconayna fariinta rajada ah waxaan haynaa martiqaadka "Come." "Ruuxa," waa Ruuxa Quduuska ah, wuxuu yidhi, "Kaalay." Laakiin Yooxanaa wuxuu qoray in "aroosadda" ay sidoo kale yiraahdo "Come."
Aroosku waa kaniisadda, jidhka Masiixa. Waa in aynaan si fudud u helin martiqaadka nafta, laakiin waa inaan u gudbinnaa. Sanadihii la soo dhaafay, wax badan ayaa la qoray, oo wuxuu ku sheegay fariinta nooca farriinta aroosadda, kaniisadda, ayaa u diraya dunida. Maxaan nidhaahnaa? Qaarkood waxay yiraahdaan "yimaadaan" iyo "abuuraan" faragalintan oo aad noqotid maaliyad dhaqaale. Qaarkood waxay yiraahdaan "yimaadaan" oo u codeeyaan siyaasi aan jecelnahay. Qaarkood waxay yiraahdaan "yimaadaan" kaniisadeena, waadna ku faraxsanaan doontaa.
Laakiin, markaan nidhaahno, "iman," waa inaan ujeeddanno sida Ruuxa macnahiisu yahay. Warren Wiersbe ayaa qoray, "Rumaystayaashu waa inay ku martiqaadaan kuwa denbiilayaasha ah ee lumay inay aaminaan Masiixa oo cabaan biyaha noloshooda, run ahaantii, marka kiniisaddu ku nooshahay rajada Masiixa, waxay ka dhigan tahay dabeecad ka tarjumaysa wasaaradda iyo wacdinta iyo sidoo kale nadiifnimada wadnaha. inay u sheegaan dadka kale ee nimcada Ilaah, fahamka dhabta ah ee waxsii sheegista BIme waxay labadaba dhiiri gelinaysaa inaan adeecno ereyga Ilaah iyo inaan la wadaagno yeedhitaanka Ilaah ee adduunka luntay. "
Waa inaan ku dhaafno casuumada Ciise Masiix iyo Ruuxa Quduuska ah. Waxaana jira waxyaabo badan oo la sameeyo oo kaliya. Farriinta kaniisadda ee loogu talagalay fadeexadaha galmada ee sanadkaan waa in ay ahaato, "Kaalay, oo Masiixa ha bogsii nabarkaaga." "Kaalay, oo Masiixu wuxuu beddelaa qalbigaaga qalaad." Kuwa ay saameeyeen dhibaatooyinka opioid, waxaan dhihi karnaa, "Kaalay oo Masiixa ka dhex baxdaa qalabka noloshaada." Kuwa u dhinta xubnaha qoyska ee rabshadaha iyo musiibooyinka dabiiciga ah sannadkan, waxaannu nidhi, "Kaalay, oo Masiix ha kuugu naxariisto rajadaada." Kuwa u dhinta shaqooyinkooda, noloshooda, hawlgabkooda, ama waxa aad haysato, waxaan dhihi karnaa, "Kaalay, oo Masiixu ha idin siiyo nolol ka sii badan." Waxaan u dhignaa nafta adduunka, daacad ah, nafsadda jirran, waxaan dhahnaa "Kaalay, helid badbaadada, xiriirka Ilaahay, iyo guri Jannada."
Kaalaya oo fikira; waayo,
Keen kursiga daboolka, si tartiib ah u jilbo.
Halkan soo qaado qalbigaaga dhaawacan, halkan u sheeg xanuunkaaga;
Dunida ma laha murugo in samada aan bogsan karin.
Halkan fiirso Nafaqada Nolosha, arag biyo socda
Ka fogow macbudka Ilaah, Oo ka sarraysa qalbiga.
Kaalaya oo i jecel. soo gal, oo weligiis wax garan
Dunida ma laha murugo, laakiin samadu ma bogsan karto.
Kaniisadda, miyaad kordhin doontaa casumaadda maanta? Dembiilayaal, miyaad helaysaa casuumaadda maanta? Masiix oo ku yidhi, Ii kaalaya, kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow, oo anigu waan idin nasin doonaa. Kaalaya, oo naftiinna nasashaad u heli doontaan.
Ii ogolow inaan kuu tuso sida aad naftaada ugu nasan karto adiga oo rumeysnaya iimaankaaga iyo kalsoonida Ciise Masiix.
Saddex, aqbal xaqiiqda ah inaad ku jirto jidka jahannamada. Ciise Masiix wuxuu ku yiri Matayos 10:28: "Ha ka baqina kuwa jidhka dila, laakiin aan awoodin inay dilaan, laakiin ka baqa kan naftiisa iyo jidhka jahannamada ku baabi'in kara." Sidoo kale, Kitaabka Qudduuska ahu wuxuu leeyahay Muujintii 21: 8: "Laakiin kuwa cabsila'aana, iyo kuwa aan rumaysan, iyo kuwa karaahiyada ah, iyo gacankudhiiglayaasha, iyo kuwa sinaysta, iyo saaxiriinta, iyo kuwa sanamyada caabuda, iyo beenlowyadooda oo dhan, naxwe: taas oo ah dhimashada labaad. "
Haddii aad ku kalsoon tahay Ciise Masiix sidii Badbaadiyehaaga, oo aad tukatid tukashadan oo macneheedu ka ahaaday qalbigaaga, waxaan idiin sheegayaa in ku salaysan ereyga Ilaah, hadda waxaad ka badbaadisay jahannamada oo aad jidkaaga jannada ku jirtaa. Ku soo dhawaada qoyska Ilaah! Hambalyo ku saabsan sameynta waxa ugu muhiimsan ee nolosha iyo in la helayo Ciise Masiix sidii Rabbiga ah Badbaadiyehaaga. Wixii macluumaad dheeraad ah si aad uga caawiso inaad ku korodho rumaysadka cusub ee Masiixa, u gudub Gospel In Light Society.com oo akhri "Waxa aad sameyneyso marka aad gasho albaabka." Ciise Masiix wuxuu ku yiri Yooxanaa 10: 9, "Anigu waxaan ahay albaab, haddii qof uun galo, wuu badbaadi doonaa, oo wuu iman doonaa, oo geli doonaa, oo wuxuu heli doonaa daaqsin."